Ezweni lanamuhla, cishe abantu abangamaphesenti ama-3 emhlabeni wonke banesifo sengculaza ye-hepatitis C. Leli fomu le-hepatitis lidluliselwa kusuka kumuntu kuya komuntu ngegazi, ngokocansi nangomntwana okhulelwe okhulelwe. Ukuthi banesandulela ngculazi, abesifazane abaningi bathola kakade ngesikhathi sokuhlela (noma ukukhulelwa). Ngokwemvelo, umusha omusha unemibuzo: "Ungakwazi yini ukuhlanganisa isifo sofuba nesifo sokubeletha?"
Ngokuvamile, izinsana zizalwa ziphilile. Kodwa-ke, ngemva kokuzalwa, iminyaka eyi-1.5, umntwana angadlulisa izifo ze-antibodies egazini le-hepatitis C egazini. Kodwa lokhu akusho ukuthi umntwana osanda kuzalwa usenkontileka kumama. Yebo, nangokwenyama yendoda encane ehlolwe odokotela. Ungaba kanjani nokudla? Nge-Hypatitis C, ukuncelisa akuvunyelwe.
Ucwaningo lwabesosayensi baseJalimane nabamaJapane lubonise ukuthi ukwaziswa okuzuzwa nge-hepatitis C ebisi lwebele akutholakalanga. Kwesinye isifundo, ubisi lwebele lwavivinywa kwabesifazane abangu-34 abathintekayo futhi kwajabula ngokuthi umphumela wawufana. Ngenxa yocwaningo, ukudluliswa kwe-virus yesifo sofuba (viral hepatitis C) lapho kubeletha ingane akuqinisekisiwe. Ukwengeza, ukuxilongwa kolwazi olulona uhlobo lwe-hepatitis kule serum luphakeme kakhulu kunobisi lwebele. Ngakho abukho ubufakazi bokuthi ukubeletha kubangela ingozi eyengeziwe enganeni. Ngakho-ke, ukwenqaba ukubeletha akukhuthazwa. Kukholelwa ukuthi izinzuzo zomzimba wengane zikhulu kakhulu ekunceliseni ibele kunengozi yokuthola igciwane lesifo sofuba.
Okubalulekile ukunaka ngesikhathi sokuncelisa
Ama-Mummy kufanele aqaphele ukuqinisekisa ukuthi umlomo wengane yakho ayilanga i-aphthae nezilonda. Phela, lokhu kungaba yingozi enganeni, ngoba ngesikhathi sokuncelisa ingane isifuba singase sithatheleleke.
Owesifazane othelelekile kufanele anakekele ngokukhethekile isimo sezinsipho zakhe. Ama-microtraumas ahlukahlukene wezingono zomama okhulelwa kanye nokuxhumana nomntwana ngegazi lakhe kaningi ukwandisa ingozi yokutheleleka nge-hepatitis C. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kwenzeka umthamo wegciwane unqunywa kumama okhulelwa. Kulesi simo, ukuncelisa kufanele kume okwesikhashana. Kulaba besifazane abanezifo ezithathelwanayo zalesi sifo, lapho ingane ibelethwe ngebele, imvamisa yokutheleleka kwengane esanda kuzalwa iphezulu kakhulu kunalokho uma ingane isondla ngokufakelwa. Kubomama abanjalo, kunezincomo ezikhethekile ezivimbela ukuncelisa ingane.
Owesifazane ogulayo noma ogulayo one-hepatitis C kufanele alandele zonke izinyathelo zokuqapha (ezibalwe ngenhla) ukuvimbela ukudluliselwa kwaleli gciwane kumntwana osanda kuzalwa.
I-cold friction to the kids
Ithonya lekhompuyutha ekuthuthukiseni ingane
Ukunakekelwa amehlo ethu kusukela ebusheni
Yini okufanele uyenze lapho ingane ingalaleli futhi ingenangqondo?
Ingaphakathi egumbini lokuphumula efulethini
Izinwele zasekhaya zamaswidi zokupheka
Izindlela ezine zokwenza kahle futhi ukubopha ngesibhakabhaka ebusika
Isaladi lesitshalo ngesithombo
Amaqebelengwane nge-chocolate filling and cream
Ukudla okunempilo, ukudla okunempilo: yini ewusizo ukuba udle, ukuthi ungadla kanjani kahle?
Indlela yokuvikela intsha evela enkampanini embi
Yini ejabulisa abantu?
Aloha, Hawaii: iqoqo lezicathulo nezesekeli ezivela ku-Christian Louboutin
Ungathola kanjani ukuhleleka okulungile nokuhle?
Indlela yokuhlobisa itafula leNew New Year 2017 Fire Cock ngezandla zakho: izithombe ezingu-38 - Indlela yokuhlobisa ama-saladi, ama-appetizers, ama-hot and dessert
Banana ikhekhe nge omisiwe